04 / 09 / 2021 04 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 213 Views စာ0မှတ်ချက် 76178 နေ့စဉ် Bugle, လှယမင်းနဲ့လူကြမ်းကြီး, Belle, နေ့စဉ်အမှား, စာချုပ်, Disney, Disney မင်းသမီး, Disney မင်းသမီး, အဲလ်ဆာ, ရေခဲသော, ဂျေယောန Jameson, Lego, lego အပေးအယူ, Lego Disney, Lego Disney မင်းသမီး, Lego အေးခဲ, Lego မှ marvel, LEGO ကမ်းလှမ်းမှု, Lego Spider-Man, Marvel, ပေးကမ်း, Rapunzel, Spider-Man, ညိတွယ်, VIP, VIP ဆုများ, VIP ဆုပေးစင်တာ
အသစ်၏တစ် ဦး စုဆောင်းမှု Lego VIP ပရင့်များကိုအွန်လိုင်းမှတွေ့သည်၊ ၎င်းမှလာမည့်အခမဲ့ပစ္စည်းအချို့ကိုနောက်ပြောင်နေသည် Lego အုပ်စုလိုက်ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသည် Disney နှင့် Marvel.
ထုတ်ကုန်သစ်လေးမျိုးကိုတရားဝင်အွန်လိုင်းပေါ်သို့ထည့်ပြီးပါပြီ Lego စတိုးall 8 / $ 10 / €9တန်ဖိုးရှိအခမဲ့ပစ္စည်းများအဖြစ်စာရင်းသွင်းထားသည်။ ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်သူတို့၏အမှတ်တံဆိပ်များအရ VIP တံဆိပ်များဖြစ်ပုံရပြီး၊ သုံးမျိုးမှာထူးခြားသောဒီဇိုင်းများကိုသရုပ်ဖော်ထားသောပိုစတာများဖြစ်သည်။ Disney မင်းသမီးများနှင့်တ ဦး တည်းပြုလုပ်ခဲ့သည် Lego Marvel.
5007043 Spider-Man နေ့စဉ် Bugle ပိုစတာ ၎င်းသည်လှောင်ပြောင်ရန်ဖန်တီးထားသောအရောင်းအ ၀ ယ်တစ်ခုဖြစ်သည် 76178 နေ့စဉ် Bugle ၎င်းသည်အပြည့်အဝမထုတ်ဖော်မီနှင့်အင်္ဂါရပ်များ Spider-Man Daily Bugle မှာထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုကနေဂျေ Jonah Jameson ကိုသယ်ဆောင်ရင်း New York ရဲ့လမ်းတွေပေါ်ကိုဖြတ်လျှောက်တယ်။ စတိုင်ကျသောဟာသပုံစံဒီဇိုင်းသည်အပိုင်းအစကိုအသက်ကြီးရန်ကူညီပေးသည်။
Belle, Elsa နှင့် Rapunzel တို့သည်ဘာသာရပ်များဖြစ်သည် 5007117 Disney မင်းသမီး Art - Belle, 5007118 နှင့် 5007119 အသီးသီး နောက်ဆုံးနှစ်ခုကပထမနာမည်ဆင်တူတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုဝေမျှလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပေမယ့်အတည်မပြုရသေးပါဘူး။ တစ်ခုစီသည်မင်းသမီး၏ရုပ်ရှင်မှရိုက်ထားသောအုတ်ခဲနှင့်တည်ဆောက်ထားသောအထင်ကရမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုပြသည်။
ဒီပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုဖြန့်ချိမယ်ဆိုတာကိုမပြောထားပေမယ့်သူတို့အတွက် VIP တံဆိပ်ပေးထားတာကြောင့်သူတို့ဟာအသင်းဝင်အစီအစဉ်အတွက်အနာဂတ်ဆုလာဘ်တွေဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်သီးသန့်ကမ်းလှမ်းမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ငါတို့ပိုသိတာနဲ့မင်းကိုအသိပေးပါမယ်။
← အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော log cabin သည် LEGO နှင့်ပူးပေါင်းသည် Ideas ပြန်လည်သုံးသပ်အဆင့်
အဆိုပါ LEGO House LEGO CON အတွက်လုပ်သောနံရံဆေးရေးပန်းချီများပြီးစီးသည် →